Amụba ndụ Ezi ntụziaka - Best amụba Ifriizi Mịrị Food
Ndị na-achọ usoro nri nri dị mma na ọsọ ga-enwe obi ụtọ ịchọta ụzọ nri ngwa ngwa niile dị. Ndị a ngwa ngwa Ezi ntụziaka nwere ike enyere gị aka ike efere ị na-ejikarị na-eche na-agaghị ekwe omume. O doro anya na, mgbe ị na-amalite ịgagharị ohere, ị ga-achọta ọtụtụ ndị oké echiche maka nri abalị.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgha njem ma ọ bụ naanị ịchọ echiche ọhụrụ maka nri abalị, ọ dị mma ị toa ntị na ihe ndị eji arụ ọrụ na usoro nri dị mma na ngwa ngwa. Ọ bụrụhaala na ị na-anụ ụtọ ọtụtụ n'ime ihe ndị ahụ, ị ga-enwe obi ụtọ na usoro nri dị mma.
You laghachiri ụlọ mgbe ị rụsịrị ọrụ ụbọchị ụbọchị ma chọọ ịkwadebe ihe dị mfe? Look na-ele na ngwa nju oyi na naanị ihe nke dị mfe bụ nri abalị anaghị eri oyi, N'okpuru ebe a bụ ole na ole nke usoro nri dị na-eme nke ọma ndụ.
Chọọ maka nri nri dị mma ga - enyere gị aka ịkwadebe ihe niile ma ọ bụ akụkụ nri ahụ tupu oge eruo. N'ihi ya, ị nwere ike ịmepụta nnukwu flavored efere site na ngwa ngwa Ezi ntụziaka. Site ugbu a gaba, enwekwaghị ihe ngọpụ maka enweghị ezi echiche maka nri abalị kwa abalị.
Ndị a bụ ụfọdụ usoro nri ngwa ngwa ma dị mfe iji kwadebe nri ụtọ dị ụtọ:
– Obe Tortilla
Efrata maka ọkụkọ tortilla ofe uzommeputa:
8 tablespoons canola mmanụ; 5 ọka tortillas si 10 “ruo 12”; 1 yabasị; 6 mkpụkọ galik; 1 mpempe coriander; 2 Mkpọ, 14.5 oz o dik tomato; 8 iko ọkụkọ efere; 14 ounces oka ma obu oyi kpoo; 3/4 – 1 1/2 tablespoons n'ala cumin; 1/2 – 1 tablespoon chili ntụ ntụ; 4 n'ọnụ mmiri doo; 4 ara anụ ọkụkọ na-enweghị akpụkpọ anụ ma ọ bụ nwaa apata ụkwụ; 1/2 teaspoon ose cayenne; 1 ihe ọ juiceụ juiceụ lemon
– Chicken Tortilla Ofe Ntụziaka hodszọ
Bee 2 tortillas n'ime 1/4 inch ibe na ighe ke 3 tablespoons nke canola mmanụ. Wantchọrọ ka ha bụrụ aja aja aja, ma kpachara anya ka ị ghara ịgba ha ọkụ, ha na-esi nri ngwa ngwa. Dabere na nha gị pan, nwere ike esi nri ọtụtụ n'otu oge.
Wepụ ibe ndị dị na pan wee nyefee ha na akwa nhicha akwụkwọ iji kpochapụ ha.
Kpoo mmanụ fọdụrụ na-acha ọkụ ọkụ dị ọkụ ma gbanye yabasị maka nkeji ole na ole.
Tinye galik na sauté ọzọ nkeji ma ọ bụ abụọ. Dọkasịa nke fọdụrụnụ 3 ọka tortillas n'ime obere iberibe ma gbakwunye na pan.
Tinye coriander, bido ma sie nri abalị ọzọ. Add mkpọ tomato na ihe ọ juiceụ juiceụ ọkụkọ na efere, kumin, chili ntụ ntụ na n'ọnụ mmiri doo ma mee ka otuto.
Belata ọkụ ahụ na obụpde; tinye ọka, ara dum ọkụkọ na ose cayenne. Esi nri anụ ọkụkọ 15 ka 20 nkeji ruo mgbe ha siri.
Wepu anụ ọkụkọ ma mee ka ọ dị jụụ. Kwụsị ofe n'oge a. Mgbe ara ọkụkọ na-ajụ oyi, jiri aka gị kee ha wee weghachi ha na pan.
Tinye ihe ọ lemonụ lemonụ lemon ma gbalịa ụtọ oseose. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị karịa, tinyekwuo ngwa nri. Reheat ma jee ozi na eriri tortilla eghe.
Nwanne m nwanyị na-ejikarị tortillas e ghere eghe nye ndị a ọkụkọ tortilla, ube oyibo, grated cheddar na utoojoo ude. Utoojoo ude nyere aka mee ka uda di uto nke oma ma nye ofe ihe di egwu. Ofe a bụ nri.
– Chili na anụ
Agba gị paụnd nke anụ na a nnukwu frying pan. Gbakwunye na nke agwa, a mkpọ nke diced tomato, obere ite ihendori tomato na otu n’ime ihe ndị a na-ekpu ose na-esi ísì ụtọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ na na, tinyekwara ose diced. Weta na obụpde ma sie nri maka ihe 20 Nkeji (ma ọ bụ ruo mgbe afọ gị toro na-achọ ka ị banye). Ebe a. Have nwere ụtọ chili con carne.
Na mbụ, tinye mmiri esi n’elu pasta gị. O nwere ike iburu ebighi ebi, yabụ na ị ga-ebu ụzọ bido pasta gị. Dika chili, aja aja gị paụnd nke anụ na a ọkara ka nnukwu saucepan. Wunye pasta ọkacha mmasị gị n'ime ite. Ebido na obụpde dị ka ogologo oge dị mkpa maka pasta na-esiri al dente (ọ bụ mkparịta ụka mara mma maka obere oge – ọ dị ntakịrị ike). Were otu efere nke pasta ma kpuchie ya na anụ gị ihendori.
– Achịcha ọka Mexico
Ntụziaka a dị obere, ma ọ ka na-ada n'okpuru ụdị ngwa ngwa na ngwa ngwa. Nke mbụ, were ite ole na ole nke achịcha ọka ma soro ntuziaka maka ịme achịcha ọka (ị ga-achọ akwa na mmiri ara ehi). Wunye ọkara mgwakota agwa n'ime mpempe akwụkwọ; oyi akwa aja aja aja, a mkpọ ọka drained na grated cheese (Jackhed cheddar na-amasị m).
N'elu ya, ya na ndi fọduru nke utu ọka, esi nri ruo mgbe elu ahụ bụ ọlaedo. Ọ nwere ike ịdị ka ihe ịtụnanya, ma ọ ga-abụrịrị nri ụtọ na kichin gị.
– Amịrị na osikapa fries
1 n'arọ nke dabere n'ala beef; 1 tsp coarsely chopped yabasị; 1/2 tsp coarsely chopped green ose; 2 tablespoons nke tomato kechoopu; 1/4 ts nke nnu; 1/2 ts. Mọstad kpọrọ nkụ; 1 1/2 c esie osikapa; 1 mmiri ara ehi tsp; 1 nke ero ude; 1 1/2 c grated cheddar chiiz; 1 tablespoon worcestershire ihendori; 2 tbsp coarsely kụrụ ọka flakes; 3 tablespoons nke gbazee butter.
– Ghaa anụ, yabasị na ose na nnukwu skillet ruo mgbe anụ ahụ bụ aja aja aja; igbapu abụba.
– Gwakọta ketchup, nnu na mọstad kpọrọ nkụ.
– Gbanwee ngwakọta anụ ahụ n'ime efere casserole nke lita abụọ; gbasaa osikapa n’elu.
– Jiri nwayọ webata mmiri ara ehi n’ime ofe ero.
– Gwakọta chiiz na Worcestershire ihendori.
– Wunye n’elu anụ na osikapa.
– Gwakọta flakes ọka a na-egwepịa na butter; fesa ọbụnadị na pan.
– Ime na preheated oven na 375 degrees F maka 35 ka 40 Nkeji ma ọ bụ ruo mgbe ọkụ na afụ.
Na-abịa oge adịghị anya, Ezi ntụziaka maka: jim ’s tortilla ofe Ntụziaka
I nwekwara ike zụọ anyị ahụike na nri na-edozi ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ ngwaahịa ebe a ma ọ bụ site na ịlaghachi n'ụlọ anyị na ịmụtakwu ihe Eme nke ọma Ifriizi a mịrị amị nri ma ọ bụ mụta otu esi enyere ndị mmadụ aka ma nweta ego na-eme nke ọma ndụ ọkachamara.